व्यवसाय योजना शुल्क: १TP२TT,470० आकार: -5 45--55 पृष्ठहरू। पहिलो ड्राफ्ट: टर्नअराउन्ड: -10-१० व्यवसाय दिन।
शीर्ष १० मध्ये एकको रूपमा
अमेरिकामा आप्रवासन व्यवसाय योजना लेखकहरू,
हामी तपाइँको लागि ठीक गर्छौं!
विशिष्ट व्यापार योजना को सामग्री
अनुमानित Year बर्ष बिक्री बिक्री
अनुमानित Year बर्षको नाफा र नोक्सान विवरण
अनुमानित Year बर्ष नकद प्रवाह पूर्वानुमान
Year बर्षे शेष रकम
तपाईं हाम्रो ज्ञानबाट फाइदा लिनुहुन्छ। सबैभन्दा माथि, भर्खरको आधिकारिक र अनौपचारिक USCIS भिसा व्यापार योजनाहरूको आवश्यकताहरू।
हरेक दिन, हामी अन्य भिसा आवेदकहरूलाई मद्दत गर्दछौं जसको आवेदनहरू यूएससीआईएसले अस्वीकार गरेको थियो। किन? खराब व्यापार योजनाहरूको कारण।
तसर्थ, यसले हामीलाई USCIS, अनुप्रयोग अस्वीकार गरेको ठिक कारणहरू हेर्न अनुमति दिन्छ। त्यस्तै अन्य आवेदकहरूलाई थप प्रमाणको लागि अनुरोध गरिएको थियो।
तपाईं एक freaky द्रुत डेलिभरी प्राप्त गर्नुहोस्
तपाईंले आफ्नो भिसा व्यापार योजना 5--7 व्यापार दिनमा देख्नुहुनेछ। अर्को शब्दमा, हाम्रा सबै प्रतिस्पर्धीहरू बीच सब भन्दा छिटो डेलिभरी समय। थप शुल्कको लागि छिटो days दिनको द्रुत सेवा उपलब्ध छ।
एक अपराधी मूल्य छ!
यो EB-5 व्यवसाय योजनाहरू उचित भुक्तानी व्यवस्था को लागी $3,490 हो। 1०१TP1T अग्रिम र 1०१TP१ टी जब तपाईंको व्यापार योजना समाप्त हुन्छ।
असीमित सम्पादन! केवल नेटिजि अंग्रेजी बोल्ने लेखकहरू।
तपाईले २-3--35 पृष्ठ व्यवसाय योजना पाउनुहुन्छ। Year बर्ष अनुमानहरू सहित ...
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ... हामी त्यो मा धेरै राम्रो छौं!
हामीलाई अमेरिकामा शीर्ष १० इमिग्रेसन व्यवसाय योजना लेखकहरू मध्ये एक हुन पाएकोमा सम्मान गरिएको छ ('EB5 इन्भेस्टर पत्रिका, २०१ 2016' अनुसार)।
हो को कुरा अनुसार ...
I-526 याचिकाको अंशको रूपमा, "एक EB-5 लगानीकर्ता एक व्यापक व्यापार योजना पेश गर्नु पर्छ।"
त्यसोभए, यसले निम्न समावेश गर्नुपर्दछ:
व्यापार, उद्देश्य र अपरेशन्सको स्पष्ट र संक्षिप्त कार्यकारी सारांश प्रदान गर्दछ।
यदि यो राम्रो तरिकाले गरिएको छ भने, अध्यागमन अधिकारी विश्वस्त महसुस गर्दछन्। भन्नुपर्दा, रिपोर्टमा सबै आवश्यक जानकारी समावेश हुन्छन्।
लगानी गरेको पैसा देखाउँदछ
साथै ती कोषहरूको स्रोत। त्यो लगानी गरिएको पूंजी उद्यममा "जोखिममा" हुनुपर्दछ।
एक बाध्यकारी (र प्राथमिकताका बाह्य) बजार र / वा उद्योग विश्लेषण प्रदान गर्दछ
यसले लक्षित बजार र सम्भावित ग्राहकहरूको विवरण समावेश गर्नुपर्दछ।
प्रतिस्पर्धी व्यवसायहरूसँग तुलना समावेश गर्दछ
तिनीहरूको शक्ति, कमजोरीहरू, उत्पादनहरू, र मूल्य निर्धारण (सामान्यतया SWOT विश्लेषण भनिन्छ)।
बिक्री र मार्केटिंग रणनीति वर्णन गर्दछ
व्यापारको लागि जुन बजार, उद्योग, र प्रतियोगिहरूको बारेमा जानिन्छ के फूर्ति लगाउँछ।
कसरी व्यवसायले उसको अनुमानित लक्ष्यहरूमा पुग्ने रणनीति देखाउँदछ।
अपरेशन वर्णन गर्दछ
वर्णन गर्दछ, सजिलैसँग बुझ्ने उद्योग बाहिरका मानिसहरूलाई (इमिग्रेशन अधिकारीहरू), "कसरी" व्यवसाय संचालन गर्छ। EB-5 व्यवसाय योजना निर्माण, उत्पादन, सेवा, वा मुद्रीकरण गर्न को लागी अर्को मूल्य-प्रक्रिया को वर्णन गर्नु पर्छ। यो कार्यान्वयन र लागत बीचको खाली पुल।
रणनीतिक गठबन्धन देखाउँदछ
रणनीतिक गठबन्धन, संयुक्त उद्यम, र कुनै पनि महत्वपूर्ण आपूर्ति संरचना (यसले ठाउँमा कुनै पनि सम्झौताको केही विवरण समावेश गर्नुपर्दछ)
वित्तीय तथ्या .्क प्रस्तुत गर्दछ
पारदर्शी तरीकाले र बिक्री, लागत, र आयको विस्तृत अनुमानहरू देखाउँदछ। सामान्य अभ्यास लाभ र हानि, नगद प्रवाह, र ब्यालेन्स शिट को लागी5बर्षे पूर्वानुमान हुनु पर्छ।
व्यापार विकास इलस्ट्रेटेड
ब्यापारको संगठनात्मक संरचना, रोजगार लागत, र मुख्य कर्मचारीहरूको अनुभव र विभिन्न काम भूमिकाको जिम्मेवारीहरूको सचित्र वर्णन गर्दछ। यो बुझिएको छ कि व्यापार अर्को over बर्षमा विकसित हुनेछ (र कम्तिमा २१ महिना भित्र 10 रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ)। साथै, भाडामा लिनको लागि समय सारिणी महत्वपूर्ण छ।
विश्वसनीयता प्रदर्शन र बाहिरी स्रोतहरू प्रयोग भएको थियो।
यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै हामी एउटा व्यापार योजनाको मस्यौदा तयार गर्दछौं।
त्यस पछि, हामीले दिमागमा राख्नु पर्छ कि कागजात मात्र हुनुपर्दैन पूर्ण, विश्वसनीय, सम्भाव्य, र स्थिर अनुसन्धानको साथ। समान शिरामा, यो हुनु आवश्यक छ लचिलो र सामान्य योजनाबाट केही अपरिहार्य विचलनहरूको लागि अनुमति दिन पर्याप्त।
तपाईंको ग्राहक वा तपाईंलाई आवश्यक छ एक धेरै साधारण प्रश्नावली पूर्ण गर्नुहोस्.
हामी सबै उत्तरहरू समीक्षा गर्दछौं। त्यसो भए, --additional थप प्रश्नहरू सोध्नुहोस्, तपाईंको ग्राहकले हाम्रो शुल्कको 1०१TP१ टी दिन्छ - र हामी सुरु गर्न तयार छौं।
7-7 व्यवसाय दिनहरूमा तपाईं प्रारम्भिक ड्राफ्ट प्राप्त गर्नुहुनेछ।
हामी एक व्यवसाय योजना को एक प्रतिलिपि संलग्न गर्दछौं जुन हामीले तपाईंको संदर्भको लागि पूरा गर्‍यौं।
यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने तपाईंले हामीलाई जानकारी दिनु हुन्छ।
त्यसोभए तपाईं तयार हुनुहुनेछ!
तपाई सायद एउटा नमूना ब्यापार योजना हेर्न चाहानुहुन्छ?
योजना अध्यागमन कानून फर्म होईन र एक वकील को सल्लाह को लागी एक विकल्प छैन।
योजना आप्रवासन संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता र आप्रवासन सेवा (युएससीआईएस) वा अन्य कुनै सरकारी एजेन्सीसँग सम्बद्ध वा समर्थित छैन।